kingswel michini mumwe mukuru kugadzirwa nezvigadziko akarova Kuumbwa michini munyika. The kambani iri majoring mune pamasikiro, kugadzira uye vaitengesa mhando dzose akarova Kuumbwa michina zviri zvakakodzera mukugadzira mukaha epurasitiki zvigadzirwa zvakadai epurasitiki hombodo, nehari, emiti, mabhokisi, mabhegi, matoyi, mapurasitiki zviumbwe, super-guru chikweshe zvirongo nezvimwewo pamwe basa kubva 0.01-5000 fő. The guru 1000-fő mhango ichivhuvhuta-Kuumbwa muchina uri pano chaipo. With 60% of rokurwa musika, mhando akasiyana-siyana nekambani worldwidely atengeswa Southeast Asia, Europe, America, Arabia nyika etc. Allthe zvinoumba zvigadzirwa vakapfuura ari advertising kuAmerican Ul, CSA kana IS09000 (2000) kuti anoita zvigadzirwa nechokwadi kuti chemhando yepamusoro zvigadzirwa pose.
We vanoomerera nezvokutenda, nesimba rose kuita wokutanga kirasi kugadzirwa nezvinhu zvakasiyana-siyana mhando yepamusoro inosimbiswa, uye zvakakwana kuratidza ukama pakati zvinhu zvedu uye vanhu, uye kukwanisa kuchinja kwayo kusvikira nguva.
Zvatiri pachimwe harisi chete miniti yacho makanika magadzirirwo kana chikamu mashandiro, asi tinoedza zvatinogona nesayenzi nokubatanidza mweya boka rako nhasi uye mangwana.
Ose chigadzirwa zvinofungidzirwa mugadziri zvakatipoteredza tsika kushandisa uye muitiro. Tine kutsvakurudza ruzivo uye kudzidza dhipatimendi uye mambure okutengesa basa vakapoteredza nyika, uyewo noMweya yepamusoro michina uye vashandi; kuti tinogona chero nguva kunzwisisa mukana uye nokukurumidza anopa zvakanakisisa basa newe.
The kunze Zvinoonekwa fekitari